Mayelana Nathi - Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd.
I-Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd.
I-Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd. yasungulwa ngo-2013.
Kuyibhizinisi elihlukahlukene elihlanganisa ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nocwaningo lwemikhiqizo nokuthuthukiswa.Inkampani izibophezele ekukhiqizeni nasekuthuthukiseni ifenisha yokuncintisana ye-elekthronikhi, okuhlanganisa izinto ezintathu eziyinhloko: ideski lemidlalo, ideski eliphakamisayo kanye nesihlalo sokudlala.
Imikhiqizo yayo ifanele amatafula nezihlalo zokudlala zasekhaya, kanye namakhefi e-inthanethi, amathilomu amasha aku-inthanethi, kanye nefenisha ekhethekile eyenziwe ngokwezifiso yemidlalo yezandla namahholo emidlalo ye-E-sport.
Hlanganyela nathi njengoba SISHAYA OKUBILI UMHLABA WOKUDLALA!
Ithimba lethu lokuthuthukisa umkhiqizo lingabadlali bamageyimu futhi lihlala lifuna amathrendi akamuva kwezemidlalo ukuze ilethe imikhiqizo emisha emphakathini.I-TwoBlow ikhule kakhulu ngenxa yokugxila kwayo emikhiqizweni yekhwalithi ephezulu, ukwakheka kwezinga eliphezulu nokuzibophezela ekwandiseni.
Kusukela ekuqaleni e-China, kuya ekubeni yigama elaziwa emhlabeni wonke embonini, i-TwoBlow manje idayisa umkhiqizo cishe kuzo zonke izingxenye zomhlaba ezihlanganisa i-America, i-Europe, i-UAE ne-Australasia.
Kusukela ekuqaleni kokusungulwa kwayo, inkampani ibekwe endaweni yokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphezulu.
Kusukela kumatafula nezihlalo zekhefi ye-inthanethi kuye kumadeski emidlalo nezihlalo, besihlala sibheka ikhwalithi njengezinga lokusinda lamabhizinisi,amakhulu amayunithi ama co-operative, akhombisa indlela yokuthuthukiswa kwebhizinisi lethu phakathi neminyaka edlule: "Ikhredithi yentuthuko, ikhwalithi yokuphila!"
I-TwoBlow yazalwa ngombono olula: Ukucabanga kabusha enye yezingxenye ezingaphansi kakhulu zemishini yokudlala bese uyiguqule ibe yinto esiza abadlali bamageyimu badlale kangcono futhi benempilo.
Kuwumsebenzi wethu ongunombolo-1 ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wethu wamageyimu waneliseka kakhulu ngemikhiqizo abayitholayo.Yingakho yonke imikhiqizo ye-TwoBlowzihlolwa ngokuzimela ukuze kuqinisekiswe ukuthi zidlula zonke izindinganiso ze-EU ne-USA, ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi nomkhiqizo ophephile wakho nomndeni wakho.
Iqembu lethu liqukethe ongoti abahlukahlukene kodwa okokuqala nokubalulekile, sonke singabadlali bamageyimu!Sibeka kubaluleke kakhulu ukuthi wonke umuntu osebenza nathi angakwazi ukubona izidingo nezifiso zabadlali bamageyimu.Umgomo wethu omkhulu awukona nje ukukhiqiza amadeski kodwa futhi siqinisekisa ukuthi uyayijabulela imidlalo ngendlela engcono kakhulu!